Ikhaya / Blog / Uyilo lwamaBhafu lokuBala ngoxabiso, ke ngoko Thatha ibhafu yokufudumeza ebusika!
2021 / 04 / 07 uhleloBlog 421 0
Kwabaninzi basezidolophini, ukuhlamba kwibhafu yinto entle yokuphumla. Kumaqondo obushushu afanelekileyo, ithontsi ngalinye lamanzi linokonwabela ukutsiba kulusu kwaye ngokuthe ngcembe lingene kuwo wonke umzimba kwii-capillaries, ukuze iiseli zomzimba wonke zikwazi ukuphefumlela umxholo wentliziyo yazo, ngaloo ndlela ziphumlise ngokupheleleyo. Ibhafu eshushu eshushu ebusika yeyona ndlela ingcono yokukhupha uxinzelelo, ubuhle kunye nempilo! Kwaye jonga uyilo lwebhafu engama-51 oluziswe bubukrelekrele, luphucula kakhulu umgangatho wobomi.
Ngaphambili :: I-3, ~ 8, Design yoyilo yegumbi lokuhlambela, Izitayile ezahlukeneyo ekunokubonelelwa ngazo next: Iimpahla ezomileyo | Isicwangciso soKhetho lweMveliso yokuThoba eyiShishini, Ibhafu elungileyo ibaluleke kakhulu!